Ivotoerana manidina manangona tsatoka 25% ao 3Mundi
Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Ivotoerana manidina manangona tsatoka 25% ao 3Mundi
Enga anie 16, 2017
Flight Center Travel Group (FCTG), iray amin'ireo orinasam-pitaterana lehibe indrindra eran-tany, dia nanamafy ny dian-tsoratry ny dia any Eropa.
Ny orinasan'ny foibe aostralianina, izay nahazo orinasa orinasa vao haingana tany Danemark, Failandy, Alemana, Norvezy ary Suède, dia nanambara fifanarahana hampiasa vola 25% ny maso ivoho momba ny fizahan-tany sy ny teknolojia, 3mundi, izay miasa any Frantsa, Suisse ary Espaina. Ny fampiasam-bola dia antenaina ho vita ara-dalàna amin'ny Jolay 2017.
Tamin'ny 2015, 3mundi dia lasa mpiara-miombon'antoka fahazoan-dàlana any Frantsa sy Suisse ho an'ny fizarana fizahan-tany lehibe an'ny orinasa FCTG, FCM Travel Solutions, ary nivarotra teo ambanin'ny marika FCM hatramin'ny 2016.
3mundi dia naorin'i Jordy Staelen sy Simon Renaud tamin'ny 2006 ho maso ivoho mandroso manambatra teknolojia avo lenta sy talenta maha-olona hanatsarana ny serivisy fitetezam-paritra. 3mundi dia nitombo haingana tamin'ny fahazoana fitomboana isan-taona 37.8 isan-jato teo anelanelan'ny 2012 sy 2016. Ny orinasa dia mampiasa mpiasa 115 ao amin'ny biraony any Paris, Genève ary Barcelona ary laharana iray amin'ireo orinasa mandroso haingana indrindra any Eropa amin'ny FT 1000.
Hatramin'ny naha mpiara-miombon'antoka FCM azy tany France, 3mundi dia nahazo mpanjifa vaovao manan-danja ao anatin'izany ny PriceWaterhouseCoopers, manam-pahaizana momba ny injeniera iraisam-pirenena Fives Group ary ny CNRS (Ivon-toerana frantsay nasionaly ho an'ny fikarohana siantifika). Ity farany dia manana fandaniana amin'ny fivezivezena isan-taona € 35M.
Ho fanampin'ny orinasam-pitetezam-paritany any Frantsa sy Suisse, 3mundi dia miasa laboratoara fitsangantsanganana any Barcelona, ​​izay mamokatra amin'ny fomba mahomby ny teknolojia sy fitaovana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany.
"FCM sy 3mundi dia nahazo fiaraha-miasa tsara hatramin'ny 2015 ary faly izahay manamafy ny fifamatorana miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay any Frantsa sy Suisse amin'ny alàlan'ity fampiasam-bola ity", hoy i Steve Norris, talen'ny fitantanana orinasa - EMEA, Flight Center Travel Group . “Frantsa sy Suisse dia ivom-pivezivezena lehibe ho an'ny mpanjifanay efa misy ary ho an'ny kaontim-pirenena vaovao izay kendrentsika manerantany. Ity fampiasam-bola ity dia hanamafy ny toeran'ny FCM amin'ireo tsena ireo ary manohana ny paikadinay amin'ny fanitarana ny fananana fananana fananana any Eoropa, izay efa misy ny UK, Irlandy, Netherlands, Sweden, Finland, Norvezy ary Danemarka. ”
Jordy Staelen, talen'ny fitantanana, 3Mundi dia naneho hevitra hoe: “Manantena fiaraha-miasa akaiky kokoa amin'ny FCM sy ny Flight Center Travel Group izahay. Ity fampiasam-bola ity dia vaovao tsara ho an'ny mpanjifantsika sy ny mpiasanay. Manome antsika fotoana hanitarana sy hisitrahana ny tanjaka, ny vokatra, ny serivisy ary ny haitao FCM manerantany. ”
Ny fampiasam-bolan'ny FCTG ao amin'ny 3mundi no farany amin'ny fanatsarana teknolojia sy e-varotra maromaro izay nambara tato ho ato. Tamin'ny volana lasa teo, nanambara ny FLT fa nahazo tombony 24.1% amin'i Bibam, vondrona fitsangantsanganana sy teknolojia monina any Arzantina izay misy fatratra amin'ny sehatry ny fialamboly sy orinasa ary ambongadiny. Bibam (Biblos América), vondrona fitsangatsanganana faharoa lehibe indrindra ao Arzantina, dia manana sy miasa ny marika Biblos ary mpilalao e-commerce mivoatra haingana Avantrip.com. Ny fifanarahana dia hanome ny fahaizan'ny varotra nomerika FLT amin'ny alàlan'ny fahazoana miditra amin'ireo sehatra e-varotra sy ekipa fampandrosoana ny rindrambaiko Bibam.
'Seychelles dia nanolo-tena hiteraka fidirana bebe kokoa ho an'ireo mpandeha sinoa,' hoy ny minisitry ny fizahan-tany
Seychelles dia mandray anjara amin'ny fivoriana faha-105 an'ny filankevitra ambony an'ny UNWTO